Nepalistudioबिहानै खाली पेटमा के खाने के नखाने ? जान्नुहाेस् - Nepalistudio
बिहानै खाली पेटमा के खाने के नखाने ? जान्नुहाेस्
बिहानै उठेर तपाई जे खाने कुरा पहिला देख्नुहुन्छ के त्यहि खानुहुन्छ ? यदी यसो हो भने तपाई ठुलो भुल गर्दै हुनुहुन्छ । हतारमा आएर कयौं पटक हामी यस्तो गल्ती गरेर बस्छौ र खाली पेटमा जे पनि खान्छौ । यसरी खानाले हाम्रो पुरै पाचन प्रणालीमा नराम्रो असर पर्न सक्दछ । एसिडिटी, ग्याँस र चिसो जस्ता समस्या देखा पर्न सक्छ ।
प्रकाशित मिति :- २७ फाल्गुन २०७४, आईतवार २३:२३